Heerarka Luuqadda Jarmalka
Waa suurtagal in lagu dhammaystiro dhammaan heerarka sanad gudihiis waxbarashada Jarmalka. Imisa heer oo Jarmal ah iyo intee in leeg ayey qaadan doontaa in looga gudbo hal heer loona gudbo kan xiga ayaa ka mid ah mowduucyada xiisaha leh ee loogu talagalay kuwa doonaya inay bartaan Jarmalka. Waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan mowduucyadan xiisaha leh maqaalkeenna cinwaankiisu yahay Heerarka Luqadda ee Jarmal.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa barashada Jarmalka?
Kuwa doonaya inay bartaan Jarmalka waxay dhammaystiraan 0 heer oo ka bilaabanaya A2 ilaa C7. Heerarkan waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo la raacayo heerarka Midowga Yurub. Si loo go'aamiyo heerkaaga si sax ah iyo in lagu bilaabo casharka fasalka saxda ah, imtixaanka meelaynta ayaa la qabtaa bilowga. Kuwa bilowga ah waxaa toos loogu qaadaa heerka A0. Waxaan isku dayi doonaa inaan hoos ku tilmaanno dhamaan kooxaha heerarka iyo mudada tababarka ee ku dhow, maadaama ay ku kala duwan yihiin inta ay le'eg tahay in lagu dhammaystiro iyadoo loo eegayo heerarka.
A0 Heerka Bilowga: Heerkani waa heerka aasaasiga ah ee soo gelitaanka kaas oo loogu diyaar garoobayo barashada afka Jarmalka guud ahaan, alifbeetada, xeerarka higaadda, iyo qaababka gaarka ah qaarkood ayaa xoogga la saaray. Koorsooyinka badankood, tababarku wuxuu toos uga bilaabmaa heerka A1, laakiin waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u tagto A1.
A1 Heerka Bilowga: Kooxdan heerka koorsada heerka ah waxaa lagu dhammeeyaa ugu yaraan 20 usbuuc iyadoo 8 saacadood oo tababar ah usbuucii. Kooxda Intensivkurs, 30 cashar wiigiiba waxaa lagu dhammeeyaa qiyaastii 60 toddobaad.
A2 Heerka Jarmalka Hoose: Kooxdan heerka ah, kooxda koorsada caadiga ah waxaa lagu dhammeeyaa dhammaadka 20 toddobaad oo ay ku jiraan 8 saacadood oo tababar ah usbuucii, kooxda koorsada ee Intensiv waxaa lagu dhammaystiraa qiyaastii 30 toddobaad oo ay la socdaan 6 casharro asbuucii.
B1 Heerka Dhexe ee Jarmalka: Kooxdan heerkaan ah, howshu waxay u shaqeysaa si la mid ah heerarka A1 iyo A2.
B2 Heerka Jarmalka ee Dhexe-Dhexe: Kooxdan heerka ah, kooxda koorsada caadiga ah waxaa lagu dhammeeyaa dhammaadka ugu yaraan 20 toddobaad iyadoo 10 saacadood oo tababar ah usbuucii, iyo kooxda koorsada ee Intensiv waxaa lagu dhammaystiraa ugu yaraan 30 toddobaadyo iyadoo 6 fasal sitimaankiiba.
C1 Heer Jarmal Heer Sare ah: In kasta oo waqtiga dhammaystirka koorsada caadiga ah ay u kala duwanaan karaan shaqsi ahaan ardayda ku jirta kooxdan, haddana tababbarka kooxda Intensiv waxaa lagu dhammaystiraa muddo 6 toddobaad ah.
C2 Heerka Aqoonta Jarmalka: Waa kooxdii ugu dambeysay ee heerarka luqadda Jarmalka. Muddada tababbarka ee kooxdani way kala duwan tahay iyadoo loo eegayo waxqabadka shaqsiyadeed ee shakhsiyaadka.